Indlu yeParty phezu kwehlabathi!
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguRuben Gerad
Ngaba ujonge indawo entle yokuphumla nabahlobo kunye nosapho, ngaphandle kwendlela ebethathiweyo, kodwa ngaphakathi esixekweni? Indlu yetheko egqibeleleyo encotsheni yentaba iphakamileyo kwidolophu yaseTrivandrum izidla ngokubona kwepanoramic yesixeko kunye nolwandle njengezinye. Jonga izibane zedolophu ngorhatya okanye izikhephe zokuloba njengoko zisiya elwandle. Indawo yokuhlangana kosapho olugqibeleleyo, amatheko kunye nokutya kubonelelwe kwisiza. Indawo yohambo kunye nokuhlola apho ubuhle bukungqongile kwaye kufutshane nolwandle kunye nesixeko.
Le yipropathi enomhlaba weehektare ezi-2, kwaye kukho iindawo ezivulekileyo kwaye ukhululekile ukusebenzisa i-terrace ebalaseleyo kumatheko angokuhlwa. Kuhlala kukho impepho epholileyo kwaye epholileyo emini, igumbi lokulala elikhulu lixhotyiswe nge-air-conditioner kwaye onke amanye amagumbi anabalandeli. Iholo yenkosi inokusekwa kwiqela le-10-15.
Nceda ufowunele ngaphambili amalungiselelo epati kunye nokuseka iholo kunye nokutya. Ligumbi lokulala elikhulu kuphela eline-airconditioning. Ihotele i-White Dammer (inkwenkwezi emi-4) liqabane lethu le-goto kwii-buffets kunye namalungiselelo etheko. Sinabaququzeleli beminyhadala ukuba bayafuneka, nceda ufowunele iinkcukacha.
Le yindawo encopho yeentaba, ekuphela kwayo, engenazo ezinye iziphazamiso, kuya kufuneka u-odole kumnxeba onje ngeswiggy okanye iinkonzo zohambiso emnyango. I-Kovalam yi-9kms ukusuka kwipropati yethu, isixeko singaphakathi kwe-7kms, kwaye malunga ne-7kms ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. I-Judgekunnu iyakhawuleza ukuba ngumtsalane wabakhenkethi ngenxa yobuhle bayo obungaguqukiyo kunye neendawo eziyingqongileyo, kwaye unokuyisebenzisa ku-google ukufumana iividiyo ezininzi kunye neenkcukacha malunga nayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ruben Gerad
Uya kuba ne-cottage yonke kuwe kunye neendwendwe zakho.